Articles tagged 'tazzen mandizvidza'
ZBC suspends Mandizvidza 25 October 2018 HARARE - The Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) has put news and current affairs director Tazzen Mandizvidza on involuntary leave without pay. He has been barred from entering the ZBC premises, and instructed to surrender all company property in his possession which includes office keys, ...
ZBC goes after Tazzen over $1m debt 16 October 2018 HARARE - Zimbabwe Broadcasting Corporation (Private) Limited (ZBC) has dragged its acting head of News and Current Affairs Tazzen Mandizvidza to the High Court, demanding $1 083 362,09 from him, following numerous financial irregularities which were prejudicial to the company. ZBC filed the cour...
Manager exposes ZBC rot 1 November 2017 HARARE - The rot at Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) has been exposed in a court application in which the national broadcaster's board is seeking nullification of hefty pay rises effected by the company's management. The board of directors is challenging the salary increments management...
ZBC suspends Mandizvidza, Chiweshe 25 November 2014 HARARE - Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) has suspended acting chief executive officer Allan Chiweshe and general manager news and current affairs Tazzen Mandizvidza. The suspensions are part of disciplinary proceedings being instituted against suspended chief executive officer Happison...
Controversy over Bob interview 23 February 2014 HARARE - A storm of controversy is brewing about the professional conduct of Tazzen Mandizvidza, the ZBC general manager of news, in his annual birthday interview with President Robert Mugabe. The interview was touted as a “no-holds barred interview” by Mandizvidza, but what emerged was a tepi...